Lalàna mifehy ny fananan-tany any Dubai ho an'ny mpandeha an-tany sy ny tsy Silamo: Inona no fantatrao momba ny zon'ny lova? 0000
Fahasamihafana ny lalàna momba ny fananana avy any Andrefana sy avy any UAE ary ny fifandraisan'izy ireo amin'ireo tsy Silamo sy ireo mpandroaka
Raha manana fananana manan-danja ianao hampitaina amin'ireo mpandova anao, toy ny tranonao na orinasanao, dia tokony ho fantatrao ireo lalàna momba ny lova samihafa. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ireo lalàna ireo sy ny fomba ampiharany amin'ireo olona tsy avy any ivelany sy tsy Silamo monina any Dubai.
lova dia lafiny iray manerantany taorian'ny fahafatesan'ny olona iray. Ny fahafatesan'ny olon-tiana iray dia mety hiteraka olana maro amin'ny fianakaviana raha tsy misy torolàlana mazava momba ny fomba tokony hizarana ny fananana maty. Betsaka ny tranga any amin'ny fitsarana manohitra ny fananana fananana nolovaina, indrindra fa rehefa tsy misy didim-panjakana tavela izay afaka mampiseho mazava ny fanirian'ilay olona maty. Zava-dehibe ho an'ny olona monina sy miasa any an-tany hafa ny mahatakatra ny fepetra takian'ny lalàna momba ny tany fampiantranoana sy ny fiantraikan'izy ireo amin'ny fifehezana ny fanananao ary amin'ny farany dia hanomezana azy ireo olon-tiana izany.
Tny fahasamihafana eo amin'ny lalàna sy ny kolontsaina dia afaka mametra ny fahafahanao mizara ny fanananao amin'ireo izay tianao.
Mpifindra-monina tsy Silamo any Dubai, UAE
Ireo mpanatanteraka amina isan-jaton'ny mponina ao Dubai sy ny UAE. Ny mpitsangatsangana dia fantatry ny be sy ny maro fa mihoatra ny 80% eo ho eo ny tena Emirat. Ny isan'ireo olona tsy Silamo ireo dia mitombo isan'andro. Noho ny fahamaroan'ny mpivahiny tsy Silamo dia maro no mampiasa vola any amin'ny firenena hividianana fananana na mitazona ny fananany ao amin'ny firenena. Avy amin'ny firenena an-trano izay tsy Silamo maro an'isa ary any amin'ny hemisphere andrefana no tena niavian'izy ireo.
Ho an'ireo mpivahiny tsy miozolomana mba ho tafavoaka velona amin'ny tontolo iainana sy iainana vaovao, zava-dehibe ny fahafantarana ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ara-tsosialy izay misy fiantraikany amin'ny firafitry ny UAE sy ny an'ny fireneny.
Ny fahasamihafana eo amin'ny Andrefana sy ny UAE
Ny firenena tandrefana sy ny Emirà Arabo Mitambatra dia mifanohitra tanteraka amin'ny tsirairay satria ny farany dia Silamo amin'ny ankamaroan'ny mponina Arabo. Mandritra izany fotoana izany dia manana antokom-pinoana sy foko / foko isan-karazany ilay voalohany. Ny fahasamihafana eo amin'ny kolontsaina, ny firafitra ara-tsosialy ary ny finoana dia misy fiatraikany amin'ny fomba fametrahana ny rafitra ara-dalàna.
Ny UAE dia manaraka ny lalàna Sharia nefa mamela ny handikana ny ambaratonga vitsivitsy avy amin'ireo manam-pahaizana sy mpitsara Islamika. Ny lalàna Sharia dia lalàna Silamo henjana izay heverina ho masina.
Mifanohitra amin'izany, ny lalàna any amin'ny firenena tandrefana dia mifototra amin'ny foto-kevitra teôria momba ny fitantanana, toy ny demokrasia. Ity no fahasamihafana voalohany eo amin'ny rafitra ara-dalàna misy azy roa. Ny firafitry ny UAE dia mifototra amin'ny fivavahana sy ny kolontsaina Silamo, raha ny firenena andrefana kosa manana rafitra ara-dalàna mifototra amin'ny teoria momba ny fitantanana sy ny foto-kevitra politika.
Ny homogeneity fiarahamonina islamika dia manamora ny fanatanterahana fitsipika hentitra sy voafaritra izay tsy mitaky fandikana maro. Ny mpitsara dia misy amin'ny fametrahana ny fitsarana ireo raharaha madinidinika nefa ny fampiharana ny Lalàna Sharia amin'ny fahafenoany. Ny tranga tsy fahita firy dia toa omena fitsaboana manokana ihany rehefa tsy mety ny vahaolana mahazatra.
Etsy ankilany, ny fahasamihafan'ny firenena tandrefana dia midika fa ny lalàna dia tsy maintsy mivelatra sy mandanjalanja handinika izay mety ho vokany rehetra. Midika izany fa ny didim-pitsarana dia apetraka amin'ny toe-javatra isan-tsokajiny mba hahafahan'ny didim-pitsarana roa amin'ny tranga iray samy hafa. Ny fitsarana dia manana fahefana lehibe kokoa handika sy hanao fitsarana araka izay hitany.
Ny lalàna mifandova dia ny sary tsara indrindra amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny Tandrefana sy ny Emira Arabo Mitambatra momba ny rafitr'izy ireo ara-dalàna. Ny lova any amin'ny firenena tandrefana toa an'i Etazonia sy i Angletera dia mazàna manaraka ny didim-pananan'ny olona maty toa azy ireo. Ohatra, ny olona iray dia afaka manao ny fananany manontolo amin'ny asa soa na dia manana havana velona aza izy ireo. Mifanohitra, ny lalàna momba ny lova any Dubai dia mifantoka amin'ny fizarana fananana amin'ireo havana velona.
Misy fomba hentitra amin'ny fanatanterahana an'io dingana io izay ahitan'ny mpianakavy tsirairay ny lovany mifototra amin'ny tetika henjana iray izay mitaky ny fifandraisan'ny mpianakavy amin'ny maty, miralenta ary ny fiainam-pianakaviany. Misy ny fifantohana amin'ny fomban-drazana Silamo amin'ny fomba fizarana indray ny entan'ny maty.
Ahoana no ifandraisan'ireo tsy fitovian-kevitra ireo amiko amin'ny fivarotana entana
Ireo fahasamihafana ireo dia manan-danja amin'ny rehetra mpila ravinahitra, indrindra ireo izay tsy Silamo. Zava-dehibe ny fahalalana ny fahasamihafana amin'ny lalàna lova noho ny henjana ny lalàna Sharia ampiasain'ny UAE. Ny fahazoana ireo fahasamihafana ireo dia manome antoka fa ireo mpitsoa-ponenana dia mahatsapa fa mety ho mafy ny vokatr'i UAE. Ny lalàna momba ny fananana any Andrefana dia mety tsy mihatra aminao na dia a Fivarotana tsy Silamo. Noho izany, tsy maintsy ataonao am-pahamatorana ny rafitra ara-dalàna ao Emirà Arabo Mitambatra momba ny didinao farany raha tianao ny hizara azy araka ny lalànan'ny firenenao.
Ny lalàna momba ny fananana any Andrefana dia mety tsy mihatra aminao na dia vahiny tsy Silamo aza.
Ny fahasamihafana eo amin'ny firafitra ara-tsosialy sy ny kolontsaina dia misy fiantraikany amin'ny rafitra ara-dalàna an'ny firenena. Na dia mazava aza fa ny UAE dia manohana ny lalàna Sharia, eken'izy ireo ihany koa fa vahoaka marobe no mandrafitra ireo mpivahiny. Misy fepetra ara-dalàna vitsivitsy natao hanampiana anao hijanona amin'ny fifehezana ny fanananao na dia amin'ny fahafatesana sy amin'ny famaritana ny mpandova anao aza.